के तपाईंमा पनि निद्रामा हिँड्ने समस्या छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
फागुन २८ गते, २०७५ - १३:३६
कतिपय व्यक्ति यस्ता हुन्छन्, जो सुतिरहेको अवस्थामा वा मस्त निद्रामा पनि उठेर हिँड्छन् । यसरी निद्रामा उठेर हिँड्ने प्रवृत्ति दुर्लभ चाहि होइन । धेरैजसो व्यक्तिमा यस किसिमको समस्या हुन्छ । यो समस्या नै हो, किनभने निद्रामा हिँड्दा अरुसमस्या आइपर्न सक्छ । यस्ता समस्या झेल्नेहरु समाजमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । जस्तो कि, सिमराका रामहरी अधिकारी ।
अधिकारी निद्रामा हिँड्ने गर्छन् । निद्रामै हिँड्ने क्रममा एक पटक त उनले हदैसम्मको व्यवहार देखाए । उनी आफ्ना दाजुसँग सुतिरहेका थिए । अचानक नजिकै रहेको गलैचा काँधमा उचालेर कोठाबाट बाहिर निस्कदै ‘गलैचा लिने हो गलैचा’ भन्दै अचानक कराउन थाले ।
दाजु बिउँझिए र भाईलाई रोक्ने प्रयास गरे । उनलाई थाहा भयो, रामहरीलाई निद्रामा हिँड्ने समस्या रहेछ ।
रामहरी यसपटक मात्र होइन, पटक पटक निद्रामा हिँड्ने गर्थे । आफुमा यस किसिमो प्रवृत्ति विकास भएको दश वर्ष बितिसक्दा पनि आफू निद्रामा हिँड्नुको रहस्यबारे थाहा छैन । भन्छन्, ‘म निद्रामा हिँड्छु भनेर त धेरैले भनिसकेका छन् । तर किन हिँड्छु, कसरी हिँड्छु आफैलाई थाहा हुँदैन’ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार हिँड्नु स्वास्थ्यका राम्रो हो । दिनमा कम्तीमा आधा घण्टा हिँडेमा मुटु स्वस्थ हुनुका साथै शरीर स्फूर्त हुन्छ । तर हिँड्ने भन्दैमा राती निद्रामा पनि हिँड्नु भनेको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्या हो । किनकी निद्रामा हिँड्दा व्यक्ति शारीरिक रुपमा सक्रिय रहन्छ । यद्यपी, उसलाई त्यसबेला गरेको गतिविधिबारे केही थाहा हुँदैन । जसले गर्दा उसको प्रत्येक गतिविधिले उसलाई असर गर्न सक्दछ ।
कसलाई हुन्छ यो समस्या ?
निद्रामा हिँड्ने समस्यालाई चिकित्सकीय भाषामा ‘सोम्नाबुलिज्म’ पनि भनिन्छ । यो निद्रा सम्बन्धी सामान्य विकार हो । यो समस्या वयष्कको तुलनामा बालबालिका तथा युवालाई धेरै देखिन्छ । बालबालिकामा तन्त्रिका तन्त्रको राम्ररी विकास नहुने र उनीहरुमा एन ३ निद्राको कमी हुने भएकोले पनि यो समस्या बालबालिकालाई धेरै हुने गरेको अनुमान छ । एक तथ्यांक अनुसार दश प्रतिशत तीन देखि दश वर्षको उमेरका बालबालिकालाई कुनै न कुनै समयमा यो समस्या अवश्य हुने गर्छ । त्यस्तै, पाँच वर्षको उमेरका बालबालिकामा यो समस्या आम मानिन्छ ।
थकान, निद्राको कमी, चिन्ता तथा उच्च ज्वरोका कारण पनि यो समस्या हुने गर्छ । वयष्कहरुमा मदिराको अत्याधिक सेवन, विभिन्न औषधी, तथा निद्राको औषधीको सेवनका कारण पनि यो समस्या देखिने गर्छ । त्यस्तै, मानसिक विकासका कारण पनि वयष्कहरुमा यो समस्या निम्तिने गर्छ । कसैकसैलाई वंशाणुगत कारणले पनि यो समस्या हुने गर्छ ।
स्लीपवाकिङ्ग ९निद्रामा हिँड्ने समस्या० भएमा यसले मानसिक कार्य न्युरो कग्निटिभ डिसअर्डर सम्बन्धि कमीको कारण बन्न सक्छ ।
निद्रामा हिँड्दाको लक्षण
निद्रामा हिँड्दा मानिसहरुले हिड्ने बाहेक पनि अन्य थुप्रै गतिविधि देखाउन सक्छन् । यसको प्रमुख लक्षणमा निद्राकै क्रममा ओछ्यानमा सामान्य तरिकाले बस्नु देखि दायाँबायाँ हेर्नु, कोठा वा घरबाहिर हिड्नु तथा गाडी चलाउनेसम्म पर्दछ ।
सामान्य व्यक्तिहरुमा एक देखि १५ प्रतिशत सम्म रहने यो समस्या व्यक्तिमा केही सेकेण्ड वा मिनेटसम्म रहिरहन सक्छ । कसैकसैमा यो समस्या आधा घण्टा पनि हुनसक्छ । कतिपयमा यो क्रम दश मिनेट भन्दा कम समय चल्ने गर्छ ।
यो कुनै मानसिक विकार नभएका कारण कुनै अवरोध नभएमा निद्रामा हिँड्ने व्यक्ति निश्चित गतिविधि पश्चात्त निद्रामा जागेका व्यक्ति पुन आफ्नै ठाउँमा गएर सुत्ने गर्छन् ।
निद्रामा हिँड्ने व्यक्तिहरुले यस्तो लक्षण देखाउने गर्छन् ।
-विचलित हुन वा दिग्भ्रमित हुनु ।
-अरुले बोलाएमा वा जागृत गरेमा आक्रमक हुने ।
-अनुहारमा शुन्यत छाउने
-निद्रामा पनि आँखा खोल्ने
-व्यझिएको बेलामा निद्रामा गरेको कुनै पनि गतिविधि याद नहुुनु
निद्रामा हिँड्नुको कारण
जब हामी सुत्छौ तब हाम्रो मस्तिष्कले निद्राको पाँच चरण पार पर्छ । यस प्रकृयामा एउटा निद्राको चक्र हुनछ । यो चक्र ९० देख सय सम्म रहन्छ । जब हामी हल्का निद्रामा रहन्छौ, तब आँखा बेस्सरी घुम्छ र ज्वलन्त सपना देखिन्छ । प्रत्येक रात मानिहरु नन् रेम र रेम निद्राबाट गुज्रने गर्छन् । निद्रामा हिड्ने समस्या प्रायः गहिरो निद्रा अर्थात नन् रेम (एन ३ निद्रा)का क्रममा हुने गर्छ ।
त्यसैले, एउटा व्यक्तिले निद्रामा यो चरणको अनुभव गर्दछ ।
निद्रामा हिँड्ने समस्या तीन देखि चार चरणको बीचमा हुन्छ । यस चरणमा कुनै व्यक्तिलाई उठाउन निकै मुश्किल हुन्छ र व्यक्ति व्युझिएमा उसले केही समयको लागि भ्रमित महसुस गर्दछ ।
निद्रामा हिँड्ने समस्याबाट बच्ने तरीका
निद्रामा हिँड्ने समस्याबाट बच्नकै लागि विशेष उपचार गरिदैन । यद्यपी, सुत्ने समयमा मदिराको सेवन नगरेर, अनिद्राको समस्यालाई कम गरेर पनि यो समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, तनाव, चिन्ता र संघर्षबाट बचेर पनि यो गम्भीर समस्या निम्तिनबाट बच्न सकिन्छ ।
फागुन २८ गते, २०७५ - १३:३६ मा प्रकाशित
काठमाडौ । भारतमा जारी पाँचौँ संस्करणको यू–१५ ९पन्ध्र वर्षमुनि० साफ फुटबल च्याम्पियनसिपको आफ्नो पहिलो...
रसुवा । स्याफ्रुबेँसी धुञ्चे सडकखण्डमा आज बिहान ८ बजे भएको सवारी दुर्घटनाका कारण रसुवागढी क्षेत्रको...